Njalo girl ufuna ezibukeka zizinhle e kwanoma yiziphi izimo. Ukuze uthole isithombe Chic kudinga ukugunda izinwele eyingqayizivele, kodwa ngesikhathi esifanayo kufanele sibheke nje futhi Tastefully. Namhlanje kwekhanda ethandwa kakhulu, enjengamakhiwane Lely 'Izingane kana "kusukela ethandwa ewuchungechunge yethelevishini. isitayela ongenakuqhathaniswa, okuyinto won wonke amantombazane kuyinto kahle kulula, badinga kuphela thina ukuzijayeza, futhi aphumelele. Into ebaluleke kakhulu kulesi simo - ukuze inezinwele ezinde, kodwa izinwele kungenziwa kulekelelwa imicu emkhathini wezulu, ithi ngaleso sikhathi uyobheka esithé ukuphakama. Amanye amantombazane ungacabanga ngisho mayelana upende izinwele ezimhlophe ke isithombe uyobheka ngisho "imnandi" futhi kujabulise kakhudlwana.
Ukuze kwekhanda, efana Lely, sasiwumsebenzi ukuba 100%, kubalulekile ukuba ukuthenga ngefaskamu ezincane nezinkulu. Kuyinto sibonga kule divayisi uthole izinwele omkhulu futhi enhle. Ngakho, ukuze uqale ukwenza izinwele ezimanzi (kodwa kuyafaneleka ukuthi izimpande kufanele kube ezomile noma kancane omisiwe). Umsebenzi kufanele kube ne Strand ngayinye, yebo, ungakhohlwa mayelana Hairspray. Ilokhi ngalinye kumele lulungiswe kahle. Kodwa Ungeqisi it ne lemali, njengoba umphumela "icicles" wayengakamazi ahlotshiswa. Njengomthetho, kwekhanda, efana Lely, ivuliwe naphakathi sobude izinwele. Ukwehlukanisa ingxenye encane, it is ngokushesha kusetshenzwe ukuvenisha (eduze impande) bese nilimaza ku ngefaskamu. Vula sivala imfihlo kufanele cranking kanye ngefaskamu, hhayi kwa each nye. Emva inqubo, ome dryer izinwele. Futhi ungakhohlwa ukuthi ezinamasondo kuthiwa nilimaza hhayi kusukela ezimpandeni izinwele, futhi phakathi kwabo. Ngesikhathi sigaba sokugcina untwist izinwele, kodwa asazi nekama kubo.
Lely kwekhanda of "Girls" silula, kodwa usadinga isikhathi esithile. Kufanele kwenziwe ngokucophelela nangokuqondile. Ungesabi ukusebenzisa izinto zokulungisa izinwele emakhanda noma lacquer kakhulu, umkhuba ukuqala ekhaya, bese "Waphuma kuFaro evutha ulaka." Ngaphambi inqubo, ungakwazi podchesat izimpande, ukunikeza umthamo izinwele. Okubalulekile, musa nekama izinwele etholwe. Kubalulekile ukuqapha inani ukuvenisha, kufanele kube ongatheni, kungenjalo kuyobonakala ukuthi izinwele ingcolile. Ngaphezu kwalokho, kukhona inguqulo izinwele owomile phakathi emazombezombe, kodwa kungenziwa futhi ekugcineni (ubani njengoba elula). Ukuze kwekhanda, efana Lely, yimpumelelo, susa ngefaskamu ukufafaza ngokucophelela lacquer Strand isiqedile. Ungaqeda izimpande kancane podchesat futhi abashaya izandla zabo.
Polina Maximova (Heroine yochungechunge) uthanda ukwenza ngokwakho nezinwele futhi uyazi ukuthi ibukeka wakhe umxhwele kakhulu. Akumangalisi ukuthi ezinkulungwane zabalandeli ukuba khona njengoba ebukekayo futhi eyingqayizivele. Wonke umuntu wesifazane ungakwazi uzenza ubuhle kungakhathaliseki ukuthi obukhulu izinwele zakhe noma cha. Futhi, ubani angabona kanjani kwekhanda ubukeka Lely kusukela 'Izingane kana ", isithombe ukuhlukahluka amaningana asohlwini. Lokhu kuzovumela ekugcineni ngaqonda intombazane, isudi yakhe lesi sitayela noma cha, bese unquma ikusasa imfashini.
Qiniseka ukuthi ungakwazi ibukeke inkanyezi zakho ozithandayo noma kangcono ngisho. Kuwufanele nje wukuzama ezinye imizamo.
Amathe ngesiGreki ezinsikeni zawo phezu izinwele ezinde naphakathi. Izifundo eluka ukwaluka
Kanjani nekama izinwele zakho ngakwesokudla ngemva kokugeza?
Ukuzingela isibhamu "noSauer": imodeli, isithombe Ukucaciswa
Ukuhlaziywa kwesistimu ocwaningweni lokuphatha: ukuhlolwa kwezinga kanye ne-dynamics yokusebenza kwenhlangano
Zucchini "roller": incazelo, letihlungiwe izici isici kulinywe. Lapho kokutshala evulekile phansi squash
Ihhotela "Yalta-Intourist 4 *": izibuyekezo, izithombe, ikheli, yocingo
I ngwenya lushone. Izingozi e ngwenya yenuzi imikhumbi ye-USSR neRussia